Gaazexessaan ispoortii biyya Eertiraatti beekamaa ta'e dorgommii gabaasuuf Morokoo dhaqee achumaan bade. Morokoodhaa bahees biyya biraatti koolugaltummaa gaafachuu isa BBC'n mirkanesseera.
Miidiyaan OMN tamsaasa isaa waggoota muraasaan dura biyya alaatti bu'urreeffachuun qabsoo dargaggoo Oromoo keessatti gahee olaanaa bahaa tureefi waggaa kana gara biyyaatti deebi'ee, amma tamsaasa isaa TVn taasisuun maddiitti dhiheenyatti sagantaa raadiyoo Afaan Oromoo eegaluuf jira.
Gaazixeessaan Taanzaaniyaa oduu dharaa himee jedhame hidhame
Gaazixeessaan Taanzaaniyaa oduu dharaa himee jedhamuun shakkame hidhadhame
Dhaabbileen mirga gaazexeessitootaaf falman akka CPJ fi 'Amnesty International' Itoophiyaan hatattamaan gaazexeessitoota hiite gadi dhiisuu qabdi jedhan.
Motummaan Naayijeriyaa buufata Raadiyoo fi TV dhuunfaa kan jalqabaa ta'e cufe.
Walabummaa Miidiyaa: Qabsoo haqaa harmee koo ajjeefamteef
Ilmi gaazexeessituu ajjeefamte Daafnee Karuwaanaa Galiziyaa, walabumaan miidiyaa yeroo kam caalaa amma barbaachisa jedha.
Gaazexessitoonni BBC Yugaandaatti hidhaa keessa turan gadhiifaman
Polisiin Yugaandaa garee gaazexessitoota BBC magaalaa guddittii biyyattii Kaampaalaa keessatti to'annoo jala olche.
Guyyoota 100 Ministirri Muummee Abiy Ahimad aangoorra turan keessatti gama walabummaa miidiyaan jijjiiramni mul'ate jajjabeessaadha. Ammoo waan hafutu jira jedhu ogeeyyiin.
Televizhiniin Tigraay hiriira deeggarsaa Sambata darbee waan gabaasuu dhabaniif ibsa dabalataa akka dhiyeessaan Abbaa Tayitaa Biroodkaastii Itoophiyaan gaafatamuu komate.
Guuyyaa qabsoon uummataa injifannoo guddaa itti fide waan ta'eef guyyaa kanarraa eegaluun hiikaa guddaa qaba jedhu direektarri OMN obbo Jawaar Mahammad himan.
Seerri keenyaa haaraannama odeessa sobaa tamsaase maallaqaa doolaara Ameerkaakuma 50 ykn hidhaa waggaa lamaan adaba.
17 Caamsaa 2018
Ministira Muummee haaraa fi abdii gaazexeessitootaa
Guyyaa walabummaa sabaa-himaa addunyaan wal qabatee Itoophiyaan biyyoota hojii sab-qunnamtiif rakkisoo ta'an keessaa tokko ta'uu himu ogeeyyiin.
Seenaa miidiyaa biyyattii keessatti shoora gahee olaanaa kan qabu dameen miidiyaa maxxansaa wayita ammaa balaa cimaaf saaxilamee jira jedhu ogeeyyiin, kanaaf ammoo mootummaan itti gaafatamummaa guddaa fudhatas jedhu.
Somaalilaand oduu waa'ee Itoophiyaa barreessan jechuun gaazexeessitoota waggaa lama itti murteessite
Gaazexaa dhuunfaa irratti waa'ee hidhattoota Itoophiyaa barreessitan jechuun gaazexeessonni waggaa lama kan itti murtaa'e. Akkasumas hojii seera faallessu hojjetan kan jedhu himata isaanirra jira.
Dhimmoota tokko tokko namni akka qalbeeffatu gochuuf yaadachisuun barbaachisadha. Kanaafii fakkaata rogeeyyiin miidiyaalee hawaasaa waa'ee dhimmoota adda addaa kaasuun xiyyeeffannaa akka argatan yaalii kan taasisan.